बोक्सीमा विश्वास गर्नुहुन्छ! महिलाको शरिरमा देखिने यस्तो निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ?
Tue, Jun 2, 2020 at 6:34pm
सबैभन्दा गरिब, अक्षम, असहाय, श्रीमान नभएको, भए पनि काम गर्न नसक्ने, अधबैंसे आदि महिलालाई बोक्सी भन्ने प्रचलन
शुक्रबार, २८ बैशाख २०७५,	आहाखबर	6.29K
कुन संस्कारबाट हामी हुर्केका छौं भनी बुझ्ने हो भने बोक्सी, भूतप्रेतबारे धेरै कुरा थाहा हुन्छ । बाबुबाजे लगायतबाट हामीले धेरै कुरा ग्रहण गरेका हुन्छौं । उनिहरुबाट हामीले वंशाणु गुण त लिएका हुन्छौ नै, साथसाथै उनीहरुको चिन्तन, विश्वास र सोचाई पनि नजानिदो ढंगले ग्रहण भएको हुन्छ । ती पुराना संस्कारहरु पहिलेभन्दा घटेपनि अस्तित्वमा अझै छन् ।
सबैभन्दा गरिब, अक्षम, असहाय, श्रीमान नभएको, भए पनि काम गर्न नसक्ने, अधबैंसे आदि महिलालाई बोक्सी लगाउने प्रचलन हुन्छ । बोक्सीको आँखा लागे नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरीति छ ।
नेपाली समाजमा पहिलेदेखिको चलन हेर्दा कुनै रोग वा कठिनाई भयो कि सहजै समाधानको उपाय भनेको ‘हेराउने’ नै हो । ज्वरो आयो, गाई-भैसी बिरामी भएपनि जान्नेलाई बोलाएर ‘फुकाउने’ चलन थियो । शहरमै पनि कतिपय माताले महंगो शुल्क लिन्छन् र सेवाग्राहीको लामो लाईन देखिन्छ ।
जब हामी निकै डराएका हुन्छौं, तब विभिन्न शंका खेलेर झनै त्रासको वातावरण हुन्छ । हामी दिनको तुलनामा राती बढी डराउने भएकाले अनेकन शंका गरेर अनेक कल्पना गर्न थाल्छौं । हामीले जे कल्पना गर्यो, दिमागमा त्यो तत्काल देखापर्छ ।